आज श्रावण महिनाको शनिबार, भगवान विष्णुको पुजाआजा गरिँदै - पब्लिक पाेष्ट
काठमाण्डौ । आज हामी हिन्दु धर्मावलम्बीहरु भगवान विष्णुको बारेमा केही चर्चा गर्ने छौ ।हिन्दु धर्मका आराध्य देव भगवान विष्णु जसको वर्णन हिन्दु धर्म ग्रन्थहरुमा पाईन्छ । जसलाई यो संसारको पालन कर्ता पनि भनिएको छ । जसदाई यो सृष्टी कर्ता ब्रह्मा , पालन कर्ता विष्णु ,संहार कर्ता शिव एकै रुपका तिन अंग हुन ।
भगवान विष्णुको बास स्थान लोकहरुले उतम लोक बैकुण्ठ लोक होे भने भगवान विष्णुको अर्धागिनी धनकी देवी लक्ष्मी हुन । जब जब पृथ्वीमा पाप बढ्दै गयो साथै हत्या हिंसा लुट पात चोरी डकैती आदि खराब कर्मको वृद्धि भयो तब तब भगवान विष्णु कुनै न कुनै रुपमा धर्तिमा जन्मिए, पापहरुलाई नाश गरेर धर्मको उद्धार गरे । हिन्दु धर्मका अनुसार .भगवान विष्णुका रुप नाम अनंत छन् तर पृथ्वीमा जन्म लिएको आधारमा विष्णु का २४ वटा अवतार मानिन्छ । ति मध्ये दश मुख अवतार र बाँकीका सहायक अवतारको वर्णन गरेको पाईन्छ ।
श्रीस्वथानी ब्रत कथामा पार्वति लाई वृन्दाका पति जालन्धरले छल्न जाँदा यो कुरा महादेवले थाहाँ पाई विष्णुलाई यस्तो आज्ञा दिनु भयोे कि विष्णु तिमी गएर जालन्धरकी पत्नी वृन्दा लाई छल गरेर आउ किनकि जालन्धरकी पत्नी पति ब्रता नारी हुन जबसम्म वृन्दा को सत्य डग्दै न तबसम्म जालन्धरको मृत्यु हुन सक्दैेन भनि छल्न पठाउनु भयो ।
यसरी जालन्धर कि पति ब्रता स्त्रीलाई छल्ल गरी जालन्धरलाई महादेवले मार्नु भएको कथा उल्लेख भए संगै आफुलाई विष्णुले छल गरेको थाहाँ पाई पापि विष्णु तिमीले मेरो पति ब्रता धर्म नष्ट गरेयौ तिमिले गर्दा मेरो पतिको यो हालत भयो भनि आफ्नो कपाल फिजाएर विष्णुलाई यस्तो भनि सराप दिएकि थिईन्–“ पापि विष्णु तिम्रो कारण मेरो पति ब्रता धर्म नष्ट भयो झार घाँस र वृक्ष भएर रहे ”भनेर सराप दिएर पति संगै सति गएको कुरा उल्लेख भएको छ ।
तर महादेवको कारणले भगवान विष्णु झार भनेको तुलसी ,घाँस भनेको दुबो र वृक्ष भनेको पिपलको रुख आदि भएर रहेका थिए । हाम्रो शास्त्रमा उल्लेख यिनै कुरालाई मध्यनजर गरेर भगवान विष्णुका भक्क्तहरुले यि तिनै वस्तुलाई पुजा आरधना गरेको पाईन्छ ।
आज श्रावण महिनाको शनिबार, भगवान विष्णुको दर्शन स्वरुप लाईक अनि शेयर गरौँ, जय विष्णु भगवान। हामी सबैको रक्षा होस्
लोप हुने हो कि मितेरी साइनो ! कसरी बन्छ त मित ?
November 23, 2018 November 23, 2018 EP EDITOR
September 30, 2018 September 30, 2018 EP EDITOR
सञ्चालन भएन नेपाल–भारत पशुपतिमैत्री धर्मशाला
October 26, 2018 October 26, 2018 EP EDITOR